Xiaomi ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ NEV အားသွင်း ပေးသွင်း, စမတ် အစိမ်းရောင် အားသွင်း - Pandaily
Xiaomi ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ NEV အားသွင်း ပေးသွင်း, စမတ် အစိမ်းရောင် အားသွင်း
Feb 10, 2022, 19:27ညနေ 2022/02/10 23:10:48 Pandaily
မကြာသေးမီကနယူး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် လျှပ်စစ် စနစ် ပေးသွင်း စမတ် အစိမ်းရောင် အားသွင်းယွမ်သန်း ၁၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆ သန်း) တန်ဖိုးရှိ ရန်ပုံငွေ အသစ် ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤ ရန်ပုံ ငွေကို Xiaomi ၊ Yonghua Capital ၊ Suzhou Orisa Holding Company နှင့် Venture Capital တို့က ဦး ဆောင်သည်။
ရရှိသော ရန်ပုံ ငွေများကို မြင့်မားသော ဗို့အား ပါဝါ ဆက်သွယ် မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူး ခြင်း၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်အသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု အတိုင်းအတာ နှင့် အသုံးချ မှုများ ကိုတိုးချဲ့ ရန်လည်း အသုံးပြု လိမ့်မည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Zhilu Charging သည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များတွင် တွေ့ ရသော အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ ကိုသုတေသနပြု ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချ ခြင်း ပြုလုပ်သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း သည်ကား ထုတ်လုပ် သူများအတွက် high-voltage connection solutions ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်း၏အဓိက ထုတ်ကုန် များတွင် high-voltage connectors, charging နှင့် power switching connectors, power distribution devices များနှင့်အခြား အရာ များပါဝင်သည်။
ကုမ္ပဏီ တွင် Suzhou, Changzhou နှင့် Liuzhou ရှိ အဓိက ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း သုံး ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် နှစ်လယ် တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၃ သန်းကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင် ရန်ကူညီ လိမ့်မည်။ ၎င်း၏ ဖောက်သည် များတွင် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ ရှိ အဓိက ကား ထုတ်လုပ် သူများနှင့် ပေးသွင်း သူ များပါဝင်သည်။
ဤ လုပ်ငန်း သည် ၈ နှစ် ဆက်တိုက် ရောင်းအား ၏ ၁၀% ကျော်ကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် များနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ များမှတဆင့် ၎င်း၏အဓိက ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ကိုဆက်လက် တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် နည်းပညာ မူပိုင်ခွင့် ၁၆၀ ကျော်ရှိပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း ၉ ခုနှင့် အမျိုးသားအဆင့် စံချိန်စံညွှန်း များ ရေးဆွဲ ရာ တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:HoteamSoft သည် C အလှည့်ကျ ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၆၃ သန်း နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည်
“လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် တရုတ် အော်တို အစိတ်အပိုင်းများ စက်မှုလုပ်ငန်း မှ ကြီးစွာသော အခွင့် အလမ်း များကို ဆောင် တတ် ၏” ဟု Xiaomi စက်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဌာန၏ မိတ်ဖက် Sun Changxu ကပြော ပါတယ်. စမတ် အစိမ်းရောင် အားသွင်း တရုတ် အတွက် ဦးဆောင် High-ဗို့အား connectors ထုတ်လုပ်သူ အဖြစ်, အလွန် အစွမ်းထက် တဲ့ R & D နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အစွမ်းသတ္တိ ရှိပါတယ်. ငါ Xiaomi ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြို့တော်, အခွက် တဆ ယ်, နည်းပညာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့် အခြား စည်းကမ်း ချက် များ၌ အရာ အားလုံးကို ကူညီပေး ဖို့ မျှော်လင့်. “